Fadin-tseranana - Nahazo fitaovana hiarovana amin’ny "radioactivité" ny seranam-piaramanid¬ina Ivato
Fadin-tseranana – Nahazo fitaovana hiarovana amin’ny « radioactivité » ny seranam-piaramanidina Ivato
Last updated on juillet 29, 2019
Natao hiarovana ny vahoaka sy ny Firenena ny fisian’ny « détecteur portable ». Fitaovana izay nomen’ny « Agence Internationale de l’Energie Atomique » ho an’ny fadin-tseranana.
Fiarovana amin’ny « radioactivité »
Manamafy ny fiarovana ny sisin-tany ny fadin-tseranana. Isany andraikiny ny fiarovana ny vahoaka, toa ny fiarovana amin’ny voka-dratsy hateraky ny « radioactive ». Efa manana fitaovana hiarovana amin’ny « radioactivité » ny seranan-tsambon’i Toamasina. Ity farany izay manana « scanneur » mahita ny « radioactivité » eny amin’ny fadin-tseranana. Tsy ampy kosa ny fitaovana ho an’ny seranam-piaramanid­ina eny Ivato.
Nanome « détecteur portable » miaraka amin’ny « logiciel » ho an »ny fadin-tseranana ny AIEA. cc : Pixabay
Tranga izay mety ahafahan’ny mpanao ratsy manararaotra. Mba ho fiarovana amin’ny asa fampihorohoroana dia nanome « détecteur portable », miaraka amin’ny » logiciel » ho an’ny fadin-tseranana ny « Agence Internationale de l’Energie Atomique » na ny AIEA.
Fitaovana izay hampiasaina eny amin’ny seranam-piaramanidin­a Ivato. Tanjona ny hisoroka izay loza mety hateraky ny « radioactive ».
Ankoatra ny asa fampihorohoroana dia ilaina ihany koa ny fisian’ity fitaovana ity amin’ny fiarovana amin’ny « radioactivité » izay mety hita any amin’ny sakafo. Ity farany izay mila angalana « certificat de consommabilité et de radioactive ».
Handray ny Papa ny firenena Malagasy tsy ho ela. Ilaina araka izany ity fitaovana vaovaon’ny fadin-tseranana ity mba hanamafisana ny filaminana eto amintsika.
Nanamafy rahateo ny eo anivon’ny fadin-tseranana fa efa niofana ireo mpiandraikitra ny filamanana mandritra ny fahatongavan’ny Papa ny herinandro teo.